Ma taqaan, Seddaxda Webi ee Somaaliya?.!!!!!. - Latest News Updates
Ma taqaan, Seddaxda Webi ee Somaaliya?.!!!!!.
Aniga iyo Saaxibkeey oo wada Fadhino ayaa wiil yar oo uu dhalay noo yimid, Waxa uu ku yiri: Aabe meeqa Webi ayey Somalia leedahay? Aabihii ayaa yiri: Laba Webi Juba & Shabeellee. Wiilkii ayaa yiri: Aabe waa Seddax ayuu Macllinka Dugsigu nagu yiri: Aabihii ayaa yiri: Ma jirto.
Waxaan ku iri: Wiilku waa saxan yahay, waa Seddax Webi.
Webiga Dawa ( Daawad) waxaa uu ka soo bilaawdaa Buuraha Ethiopia ee “Aleta iyo Wendo”, waxa uu soo maraa Qaybo ka mid ah Dalka Kenya kadibna waxa uu Wabiga “Ganale Dorya” uga soo darsama Xuduuda Somaliya markuu soo gaaro, kadibna labadoodu waxa ey isku noqdaan Wabiga Juba.
Dawa, waxa kale oo uu leeyahay muhimad kale, meela badan oo ka mid ah hareeraha Wabiga Jiinkiisa waxaa laga helay Macdan kala ah Dahab, Titanium, Rutile iyo ilmenite gaar ahaan inta u dhexeeyso “Awata & Kojwa”, waxaana hore u sahamiyay oo ka helay Shirkadda “Texas African Exploration Company” Sanndkii 1958 dii.
Waqti dhaw, Bishii November 2014, Saddaxda wadan ee Somalia, Kenya & Ethiopia ayaa ku shiray Hotelka “Sarova Panafric” ee Magaalada Nairobi, Shirkaa oo socday muddo Saddax Cisho ah, eyna soo Qabanqaabisay IGAD, waxaa lagu heshiiyay in laga dhiso Webiga Dawa oo mar mar Fataho, Biya xireen weyn iyo goob laga dhaliyo Korontada ( Multipurpose Dam & Hydro Power Station), waxaana loo xil saaray Guddi farsamo oo warbixin ka soo saaro una soo gudbiyo IGAD.
Ma ogi meel ey ku dambeysay war bixintii, Ogoow haddii aadan wabiga Dawa wax ku leheyn, Labadaa Dal kaalama tashadeen, ee Adiga ayeyna kuu tira koobneyn Khayraadka Alla ku siiyay.
Dalka, Gaar ahaan Goballada Waqooyi iyo Nugal, waa jiraa Waadiyaal yar yar oo waqtiyada qaar Biya badan keeno, haddii biyahaa loo xiri lahaana noqon lahaa webiyaal laga faa’iido. Laakin Waadiyaashu, Webi ma ahan.
Haddadan hore u ogeyn hadda ogaaw, Xisaabo Xoolahaaga, Daawo Sawiradda Webigaaga” Dawa” ( F.S: 1, 2 & 3aad)